How'd it happen and more reports?: Forex ဈေးကွက် ဆိုတာဘာလဲ?
Forex ဆိုသည်မှာနိုင်ငံတကာ ငွေကြေးများကိုရောင်းဝယ်ဈေးက စားကြသည့် Online ဈေးကွက် ကြီးဖြစ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်၏ရည်ရွယ် ချက်မှာ Forex ဈေးကွက်တွင်ဝင်ရောက်ဈေးကစားလိုသူတွေအတွက်လို အပ်သောအခြေခံကောင်းများပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤ စာအုပ်ကိုရေးသားရာတွင် သိက္ခာရှိသောစာအုပ်များနှင့် ကျွန် တော့်၏အတွေ့အကြုံများကိုကိုးကားခဲ့ပါသည်။ ဟော့ရှော့နည်းစံနစ်များ နှင့်အချိန်တိုတိုအတွင်း သူဌေးဖြစ်လွယ်သည်ဟုကြွားလုံးထုတ်သောနည်း စံနစ် များကို ရှောင်ရှား၍ အခြေခံကျပြီး ယုံကြည်ခြင်း ခံထားရသည့် အ ကြောင်းအရာ နှင့် အချက်အလက်များကိုသာရွေးချယ်ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ပထမတစ်ခု ကနိုင်ငံ၏ စီးပွါးရေး၊ ဘဏ်တိုးနှုန်း၊ ငွေကြေးဖေါင်းပွမှုများ ကိုလေ့လာ၍ အရောင်းအဝယ်လုပ်နည်းဖြစ်သည်။ ယင်းကို Fundamental Analysis နည်းဟုခေါ်သည်။ နောက်တစ်မျိုးက ဈေး အတက် အကျ ကိုရေးဆွဲထား သောဂရပ်များ၏ပုံစံ နှင့်ဈေးအတက်အကျတို့မှဆင့်ပွါးထုတ်ယူထားသော Indicator များကိုလေ့လာ၍အရောင်းအဝယ်လုပ်နည်းဖြစ်သည်။ ယင်းကို Technical Analysis နည်းဟုခေါ်သည်။
ဤစာအုပ်၌ Technical Analysis အကြောင်းကိုအလေးပေးဖေါ် ပြပါမည်။ အကြောင်းမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်က Technical Analysis ကို အားသန်ခြင်းနှင့် Forex ဈေးကစားခြင်းမှာအချိန်တိုအတွင်းဈေးကွက်၏ လှုပ်ရှားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ အမြတ်ရရှိအောင် အရောင်းအဝယ်လုပ် ခြင်းဖြစ်ရာ Technical Analysis ကပို၍ထိရောက်မှုရှိသည်ဟုယူဆသော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်လည်း Fundamental Analysis နှင့်ပတ် သက်၍ သိထားရမည့် အကြောင်း များကိုလည်း သီးသန့်အခန်းတစ်ခုရေး သားထားပါသည်။
ယခုအခါမြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်းစတော့ဈေးကွက်ကိုစတင်ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ Forex , Gold နှင့် Index များကိုရောင်းဝယ်ဈေးကစား နိုင်သည့်အခွင့်အလန်းများလည်း သူ့နည်းသူ့ဟန်ဖြင့်စိမ့်ဝင်ရောက်ရှိနေ ပြီဖြစ်သည်။ လူတချို့လည်း Online ပေါ်မှာဈေးကစားနေကြပြီဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်တော် သိရသလောက် လူအများစု မှာရွှေကစားနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဟုသေချာမသိသော်လည်းရွှေ အကြောင်းကနားလည်ရပိုလွယ်သည်ဟုယူဆကြပုံရပါသည်။
ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖွင့်လှစ်ထားသောပွဲစား ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှ သင်တန်း ကို သွားတက်ဖူးသည်။ ထိုကုမ္ပဏီသည် Currency ၊ ရွှေ နှင့် Index များကို Trade လုပ်ခွင့်ပေးထားသော ပွဲစားကုမ္ပဏီဖြစ်သည်။
သို့ သော် သင်တန်း ပေးသော ဆရာ ကိုယ်တိုင်က ရွှေ အရောင်း အဝယ် အ ကြောင်းကိုသာ ပြောပြ၍ Forex အကြောင်းသူသိပ်နား မလည်ကြောင်းရိုး သားစွာပြောပါသည်။
အမှန်မှာရွှေ၊ Forex နှင့် တခြား Instrument များ၏ Trade လုပ် ပုံလုပ်နည်းမှာကွာခြားမှုသိပ်မရှိလှပါ။ ရွှေတစ်မျိူးတည်းကိုသာ Trading လုပ်နေလျင်တခြား Instrument များမှပေးသောအခွင့်အလန်းများလက် လွတ်သွားနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော့်အမြင်အရ ရွှေသည် နေ့စဉ် Trading လုပ်ဖို့အခွင့်အလန်းပေးနေသည်မဟုတ်ပေ။ တစ်ပတ်နေမှတစ် ခါပေးချင်ပေးမည်။ တစ်လနေမှလည်းတစ်ခါပေးချင်ပေးမည်။
ထို့ကြောင့် တခြား Instrument များကိုလည်းရင်းနှီးအောင်လုပ်ထားမှမိမိအတွက်အ ခွင့်အလန်းများပိုရလာမည်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် Trader အများစုသည် Trading လောကသို့ယခုမှစတင်ဝင်ရောက်လာသူများဖြစ်ရာ ၊ ရွှေတစ်ခု တည်း၏ နောက်ကိုလိုက်ခြင်းဖြင့် Day Trader ဟုခေါ်သည့်အချိန်တိုအ ရောင်းအဝယ်သမားများဖြစ်လာကာ အလျင်အမြန် အရင်းပြုတ်သွားနိုင်ပါ သည်။ Day Trading သည်အတွေ့အကြုံရင့် ကျက်သူများ နှင့်သာသင့် တော်ပါသည်။
ဤ စာအုပ်ကိုရေးသားရခြင်း နောက်ထပ်အကြောင်းတစ်ချက်ရှိပါ သေးသည်။ Forex ဈေးကွက်တွင်ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ Robot ဟုခေါ် သည့် အလိုလျေက် Trading လုပ်သော Software များကိုတီထွင်ရောင်း ချသူများဒုနှင့်ဒေးပေါ်လာမည်ဖြစ်သည်။ ယခုပင် Online ပေါ်တွင်ကြွား လုံးထုတ်၍အရောင်း မြှင့်တင်နေသောသူများကိုတွေ့နေရပြီ။ ထိုဈေးပေါ ပေါဖြင့်ရောင်းချသော Robot များသည်ရေရှည်မှာအလုပ်မဖြစ်ပေ။ သူတို့ ပြောတာနားယောင်မိလျင်မိမိ၏ အရင်းပြုတ်သွားဖို့အခွင့် အလန်းသာများ ပေသည်။
နောက်တစ်မျိုးမှာ Signal Provider ဆိုသူများဖြစ်သည်။ ထိုသူ များသည် အခကြေးငွေယူလျက် သူတို့အချက်ပေးသော Trade အဝင်အ ထွက်များကို နောက်လိုက်၍ လုပ်ရန်ဆွယ်ကြမည်။ လက်တွေ့တွင်အမှန် တကယ် အလုပ်ဖြစ်သော Signal Provider ရှားပါသည်။ ကြွားဝါ၍ဈေး ကွက်မြှင့်တင်နေသောအကြံအဖန်သမားတွေသာများပါသည်။ထို့ကြောင့် Trading လုပ်ချင်လျင်မိမိကိုယ်တိုင် လုပ်တတ်အောင် ကြိုးစားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။
Forex Trading သည် အရင်းအနှီးနည်းနည်းဖြင့်အမြန်သူဌေးဖြစ် လွယ်သော အခွင့်အလန်းမဟုတ်ပါ။ စံနစ်တကျလေ့လာပြီးလုပ်လျင်စီးပွါး ဖြစ်နိုင်သော လုပ်ငန်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ ယခုခေတ်သည် အင်တာနက် ခေတ်ဖြစ်ရာ Forex နှင့်ပတ်သက်သည့် အကြောင်းအရာများကို အင်တာ နက်ပေါ်မှာလည်းလေ့လာနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင်အမှန်တကယ်အတွေ့အ ကြုံရှိ၍ရိုးသားသော သူများထံ ချဉ်းကပ်၍ နည်းနာခံလေ့လာဖို့လိုအပ်ပါ သည်။
ဤစာအုပ်ကို Forex ဆိုသော ဝေါဟာရကို မကြားဖူးသောသူများ ပင် နားလည် နိုင်အောင် ကြိုးစားထားပါသည်။ Chart Pattern များ နှင့် Candlestick ပုံစံများကို ဥပမာများကြိုးစားရှာဖွေရှင်းပြထားသည်။
Indicator အကြောင်းများကိုလည်း မလိုအပ်သောအသေးစိတ်တွက်ချက် မှုများထက် သူ၏သဘောတရားနှင့် အသုံးဝင်ပုံကို ဦးစားပေးရေးသားထား ပါသည်။
ဤ စာအုပ်၌ နည်းမှန်လမ်းမှန်အခြေခံ အချက် များကိုဖေါ်ပြထား သည်ဖြစ်ရာ၊ ယင်းအခြေခံအချက်များကိုအသုံးပြုပြီး ပို၍အဆင့်မြင့်သော နည်းစံနစ်များ ကို ရှာဖွေ လေ့လာကာ မလျှော့သောဇွဲဖြင့် ကြိုးစားလျင် Trader ကောင်း တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုနောက်ဆုံးဖေါ်ပြလိုပါ သည်။
Forex Trading (Myanamr version PDF Book) by Than Han on Scribd
Posted by Ko Nge at Monday, February 20, 2017